Exclusive Interview- प्रहरी हिरासतबाटै रविको पहिलो अन्तर्वार्ताको अडियो सार्बजनिक , सुनुस के भने रविले ? « Swadesh Nepal
Exclusive Interview- प्रहरी हिरासतबाटै रविको पहिलो अन्तर्वार्ताको अडियो सार्बजनिक , सुनुस के भने रविले ?
लामिछाने र अर्का सहकर्मी युबराज कंडेललाई समाचार कक्षबाट पक्राउ गरेकोप्रति बिभिन्न संचार संस्था तथा पत्रकारहरुले बिरोध गरेका छन् । यसले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकारको नियत सही नदेखिएको आरोप धेरेको छ । पत्रकारलाई समाचार कक्षबाटै पक्राउ गर्नु आँफैमा निकै खेदजनक कार्य भएको संचारकर्मीहरुको भनाई रहेको छ । चर्चित पत्रकार लामिछाने र कंडेल यहि साउन ३० गते न्युज २४ टेलिभिजन कार्यालयको समाचार कक्षबाटै पक्राउ परेका थिए ।
रविका बिरोधीले पुडासैनी घटनामा फँसाउने खेल खेलेको केहि बिश्लेषकहरुको तर्क रहेको छ । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बलत्कार, बिभिन्न अपराध, दलालीकरण क्षेत्रमा लागेका खराब ब्यक्ति बिरुद्ध खरो र इमान्दार ढंगले आफ्नो कार्यक्रम मार्फत लामिछानेले सुचना प्रवाह गर्दे आएका थिए । नेपालको टेलिभिजन क्षेत्रमा सर्बाधिक दर्शक कमाएको ‘सिधा कुरा’ कार्यक्रमलाई बन्द गराउन केहि बिरोधी तत्वले खेल खेलेको सर्बत्र चर्चा चलेको छ । बिभिन्न मिडियादेखि सामाजिक संजालका लाखौं स्रोता, दर्शक र पाठकले रवि लामिछानेको बचाउ गर्दे तुरुन्त रिहाईको माग गरेका छन् । उनको रिहाईको माग गर्दे देशका प्रमुख शहरहरुमा प्रदर्शन शुरु गरिएको छ ।
यसै बीच पत्रकार टेक नारायण भट्टराईले चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेसंग हिरासतमै पुरेर अन्तरवार्ता लिएका छन्, जुन अन्तर्वार्ताको अडियो क्लिप यस्तो रहेको छ ।
पक्ष र विपक्षमा खडा भएको जनमतले रवि लामिछानेलाई निर्दोष वा दोषी प्रमाणित गर्न सक्दैन। उनी उभिएको सत्यको जग नै उनलाई बचाउन निर्णायक हुनेछ। राजनीतिमा भिडले निर्णयहरू प्रभावित पार्न सक्छ तर अपराधको फैसला तथ्य प्रमाणले गर्नुको विकल्प हुँदैन। सत्यको जित होस्। (पत्रकार भट्टराईको अगष्ट १८को पोष्ट )